रमाईलो ठाउँहरू तपाईंको आत्म-डिस्कवरी ट्रिपमा भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > रमाईलो ठाउँहरू तपाईंको आत्म-डिस्कवरी ट्रिपमा भ्रमण गर्न
एकल यात्राको योजना गर्दै एक मौसमी यात्रीलाई पनि व्यस्त हुन सक्छ, विशेष गरी जब यो यात्राको लागि सही गन्तव्य र त्यहाँका लागि भाग लिन सही गतिविधिहरू छनौट गर्न आउँदछ. तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने तपाईं यसलाई आत्म-खोजको लागि उत्तम बनाउन चाहनुहुन्छ.
सडकमा एक्लो हुँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा तपाईंको इच्छा अनुसार भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ, अरू कसैको तालिकाको अनुरूप बिना. पनि, कुल अपरिचित बीच भएर तपाईं आफूलाई अधिक चुनौती दिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंको आत्मविश्वासलाई बढावा दिन्छ, र पाठ्यक्रम, आत्म बृद्धि.
त्यो भनिएको छ, के तपाइँसँग तपाइँको आत्म-खोज यात्राको लागि दिमागमा एक गन्तव्य छ?? यो लेख हाइलाइट गर्दछ7सबै भन्दा रमाईलो ठाउँहरू सोलो भ्रमण गर्न.
1. स्थानहरू तपाईंको आत्म-खोज ट्रिपमा भ्रमण गर्न: अष्ट्रेलिया
अस्ट्रेलिया यसको कारण प्रायः विविधताको लागि सपनाको गन्तव्य हो अनन्त डाइविiving अवसरहरू दुबै एमेच्योर र अनुभवी गोताखोरहरूको लागि. र यदि तपाईं गोता लगाउन तयार हुनुहुन्न भने पनि, देशले प्रस्ताव गरेको धेरै लुकेका खजानाहरू पत्ता लगाउन तपाईंसँग राम्रो समय हुनेछ. अष्ट्रेलिया पनि सब भन्दा लोप हुने घर हो लोपोन्मुख पशु प्रजाति, त्यसोभए तपाईंसँग नजिकको मिलियन वर्ष पुरानो जीवाश्मसँग अन्तर्क्रिया गर्ने दुर्लभ मौका हुनेछ.
तर भनेका कुनै पनि तथ्यहरू मुख्य री छैनछोरा किन हामीले अस्ट्रेलियालाई एकल यात्रीहरूको लागि शीर्ष गन्तव्यको रूपमा स्थान दियौं. मुख्य कारणहरू देशको अनन्त शान्ति हो, भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, र सस्तो आवास विकल्पहरू. तपाईं अष्ट्रेलियामा धेरै सुरक्षित हुनुहुनेछ.
यहाँको संस्कृति धनी छ र खाना स्वादिष्ट हुन्छ, त्यसैले तपाईसँग धेरै खाना र संस्कृति सम्बन्धी चीजहरू हुन्छन् र अन्वेषण गर्न र स्थानीयबाट सिक्नको लागि यदि सबैमा तपाईंसँग समय रह्यो भने।. आवास र यातायात यहाँ धेरै किफायती छ, कसरी पहुँचयोग्य छ भनेर उल्लेख नगरौं बैंकक संसारको सबै कुनामा हो. र यदि तपाईको दिमाग चिन्तित वा चिन्तित छ भने, तपाईं जहिले पनि मन्दिर वा ध्यान केन्द्रमा पप गर्न र ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ.
3. स्थानहरू तपाईंको आत्म-खोज ट्रिपमा भ्रमण गर्न: इङ्गल्याण्ड
केही वर्ष पहिले, लन्डन एकल पर्यटकहरु द्वारा संसारको सबैभन्दा लगातार शहर थियो. त्यो एक्लो मा यो भन्नु पर्छ कि यो सुरक्षित ठाउँ हुनको लागि जब तपाईंसँग कम्पनी हुँदैन. बकिंघम प्यालेस हाल एकल यात्रीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो, तर यो लण्डनमा मात्र होइन. यदि तपाईं सीमित समयमा धेरै आकर्षणहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, केवल लन्डनमा सामेल हुनुहोस् नि: शुल्क पैदल यात्रा जब तपाईं अर्को पटक शहर भ्रमण गर्नुहुन्छ.
के तपाईं लामो दूरीको लागि एक्लै गाडी चलाउन मनपराउनुहुन्छ?? धेरै एक्लो यात्रीहरूले न्यूजीलैंडलाई मन पराउँछन् ड्राइभि। विकल्पहरू यो तिनीहरूलाई सम्झना गर्दछ. तपाईलाई सबै आवश्यक छ क्याम्पर वा साधारण कार भाँडामा लिईन्छ र सडकहरूले तपाईलाई लैजान्छ. यो एक सुन्दर देश अन्वेषण गर्न. स्थानीयहरू पनि धेरै स्वागतयोग्य र सहयोगी छन् जब तपाईं सहायता चाहानुहुन्छ.
5. स्थानहरू तपाईंको आत्म-खोज ट्रिपमा भ्रमण गर्न: पेरु
लगभग हरेक नयाँ स्थान जुन तपाईंको भ्रमण विशेष कारणहरूको विशेष सेटको लागि विशेष हो, तर पेरू एक मात्र देश हो जुन बाहिर खडा छ. यस स्थानले धेरैलाई यसको प्राकृतिक सुन्दरता र खजानाहरू चकित बनायो, कि व्यक्तिहरू बस यो पर्याप्त गर्न सक्दैन. यसको धनी इतिहास, पहाड, र परम्परागत संस्कृति, जुन हरेक आगन्तुकलाई रोचक हुन्छ. यसरी, यसको सबै राष्ट्रिय खजानाहरू अनुभव गर्न, पेरु भ्रमण गर्नुहोस्, र देशसँग परिचित हुनुहोस्.
अमेरिका विविध छ, त्यसोभए तपाईं जुनसुकै ठाउँमा आउनु भएको भए तपाईले ठाउँबाट कहिल्यै पछाडि महसुस गर्नुहुन्न. देश पनि धेरै विशाल छ र तपाईसँग पहाडहरू हुनुपर्ने सबै कुरा छ, पार्क, जंगली जनावरहरु, वा समुद्री तटहरू. समुद्र तटहरूको कुरा गर्दै, अर्को पटक तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुँदा तपाईंले फ्लोरिडा भ्रमण गर्नुपर्नेछ र सेतो बालुवामा पौडी खेल्नु पर्छ. यसबाहेक, डिज्नी तपाईंको आत्म-विकास यात्राको लागि उत्तम गन्तव्य हुन सक्छ किनकि यसले तपाईंलाई बाल्यावस्थाको सम्झना गराउन फिर्ता लिनेछ, र थोरै bittersweet पुरानो चोट कसैलाई चोट पुर्याउँदैन. र यदि तपाईंलाई के चाहिएमा केही शान्त समय एक्लो छ, तपाईं जहिले पनि एक मा रहन सक्नुहुन्छ छुट्टी भाडा भीडबाट टाढा.
7. स्थानहरू तपाईंको आत्म-खोज ट्रिपमा भ्रमण गर्न: जापान
जापान टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा अन्य देशहरूको तुलनामा माईल अगाडि छ. यदि तपाईं प्राविधिक भविष्य वा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, यस शहरमा रहेको व्यवसायिक अवसरहरूको अन्वेषण गर्दा तपाईंलाई पक्कै खुशी हुनेछ. देश सुन्दर मन्दिरको पनि घर छ, उच्च-अन्तमा होटलहरू, र रेस्टुरेन्टहरू, साथ साथै एशियाको उत्तम लुकेका प्राकृतिक खजानेहरू. अरु के छ त, यहाँ कुशल यातायात प्रणाली तपाईंको एकल यात्रा रमाईलो र परेशानी मुक्त बनाउँदछ. यदि तपाईं एक संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो ल्यापटप र आफ्नो ल्याउन सक्नुहुन्छ संगीत बनाउने सफ्टवेयर प्रेरणाले तपाईंलाई हिट हुन र हुनसक्छ तपाईको एक्लै यात्राहरूको प्रतीकको रूपमा केहि राम्रा ध्वनिहरू उत्पादन गर्न.
मलेसियामा गर्न र सिक्न धेरै चीजहरू छन्, तर यस दक्षिणपूर्व एशियाली देशको सब भन्दा चाखलाग्दो तथ्य यो हो कि जनसंख्याको ठूलो प्रतिशतले अंग्रेजी बोल्छ. यसको मतलब यो हो कि तपाई यहाँ एकल यात्रा गर्दा सायद तपाईको मार्ग हराउने छ. देशमा समुद्र तटहरू छन्, पहाड, डाइभिंग स्पट, र सबै चीज तपाई आराम गर्न र आफ्नो जीवनमा रमाईलो गर्न आवश्यक छ.
ब्याकप्याकिंग र एकल यात्रा दिन को लागी लोकप्रिय हुँदै गएको छ लचिलोपन को कारण उनीहरु. तपाईं सहि काम गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईको आवासको लागि पर्याप्त बजेट मात्र याद गर्नुहोस्, खाना, र यातायात आवश्यकताहरू छ किनकि तपाईं आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ यदि तपाईं आफ्नो आत्म-खोज यात्राको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी ट्रेनबाट तपाईंको सेल्फ-डिस्कवरी ट्रिपमा भ्रमण गर्नको लागि रमाईलो ठाउँहरू योजनामा ​​मद्दत गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "रमाईलो ठाउँहरू तपाइँको आत्म-खोज यात्रामा भ्रमण गर्न" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
आविष्कार FunPlaces सेल्फडिस्कोवरीट्रिप सोलो ट्राभेलि।
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप